खाद्य संस्थानमा ब्रम्हलुट, महानगरलाई तिरेन सात करोड कर , नक्सा पास नगरी भवन निर्माण | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
खाद्य संस्थानमा ब्रम्हलुट, महानगरलाई तिरेन सात करोड कर , नक्सा पास नगरी भवन निर्माण
काठमाडौँ । सरकारी स्वािमत्वको नेपाल खाद्य संस्थानले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई रु ७ करोड बराबरको कर नतिरेको पाइएको छ ।
समयमा धान खरिद नगर्ने र व्यापारीले किसानको खेतबाटै धान उठाइसकेपछि धान खरिदको सूचना निकाल्ने संस्थानमा पछिल्लो चार वर्षदेखि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टचार हुने गरेको पाइएको छ ।
संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक डा शिवहरि श्रेष्ठका कारण संस्था चरम रुपमा धारासायी भएको, विभिन्न निकायलाई तिर्नुपर्ने व्यापारिक तथा अन्य कर समेत नतिरेको पाइएको हो ।
डा शिवहरि श्रेष्ठलाई त तत्कालीन आपूर्ति मनत्री दीपक बोहोराले इमेल तथा इन्टरनेट समेत चलाउन नजान्ने मान्छे कसरी डा क्टर भयौ भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा नै सातो लिएका थिए ।
संस्थानले कर नतिरेको र कानुनी राज्यलाई समेत दुत्कारेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपािलकाले पछिल्लो दिनमा कडाइ गरेको छ । उसले संस्थानको हाता भित्र अर्थात् नेपाली सेनाको मुख्यालय नजिकै निर्माण भइरहेको फुटसल भवन निर्माणमा समेत रोक लगाइदिएको छ ।
संस्थानमा हर्ताकर्ता समेत रहेक निमित्त महाप्रबन्धक बताउने श्रीमणिराज खनालले गैरकानुनी रुपमा एक व्यवसायिक संस्थालाई संस्थानको सात रोपनी जग्गा कौडीको भाऊमा दिएका थिए । सिंहदरबारको नजिक तथा प्राइम स्थानमा रहेको जग्गा कुनै व्यापारिक संस्थालाई दिदा सार्वजनिक रुपमा बोलपत्र आह्वान गर्नुपनेृमा खनाललगायतको समूहले कुनै पनि प्रक्रिया नपुर्याएको महानगरको भनाइ छ ।
त्यतिमात्रै होइन महानगरले संस्थानको हाता भित्र निर्माण भइरहेको उक्त फुटसल भवनले नक्शा समेत पाश नगरेको भन्दै तत्काल निर्माण बन्द्य गर्न र बनेको संरचना समेत भत्काउन निर्देशन दिएको छ । महानगरको निर्देशनलाई अवज्ञा गरे महानगरको डोजर ल्याएर निर्माण भएका सबै संरचना भत्काइदिने चेतावनी समेत दिएको छ ।
पछिल्लो दिनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले संस्थानमा घोटाला भइरहेको र त्यसका बारेमा छानबिन गरिरहेको बताएका छन् । समयमा धान खरिद नगर्ने, खरिद गरिएको धानको परिणाम समेत कम भएको, संस्थानको गोदाममा रहेको खाद्य पदार्थमा समेत अलपत्र परेको, पानी पसेको, किरा, मुसाले खाएको र आर्थिक रुपमा समेत हिसाब गोलमाल भएको भन्दै उनले सम्वद्ध अधिकारीमाथि कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यस्तै संस्थान भित्र भएको घोटालाका बारेमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ । आयोगले पूर्व महाप्रबन्धक डा श्रेष्ठ, खनालगायतसँग छानबिन गरिरहेको छ ।
उता नक्सा विपरीत निर्माण भइरहेको मात्र होइन खाद्य संस्थानले कामपालाई रु सात करोड कर शीर्षकको बक्यौता रकम तिर्न निर्देशन दिइएको छ ।
बक्यौता रकम तिर्न र सम्बन्धित वडामा निर्माणका लागि नक्सा स्वीकृत गर्न कामपाले संस्थानलाई आग्रह गरेको छ । नक्सा स्वीकृत नगरी निर्माण कार्य शुरु गरेको र बक्यौता रकम नबुझाएका कारण नेपाल खाद्य संस्थानको भद्रकालीस्थित जग्गामा निर्माण भइरहेको भवनको निर्माण कार्यमा रोक लगाइएको छ ।
नियम विपरीत निर्माण कार्य गरेकाले काठमाडौँ महानगरपािलकाले निर्माण कार्यमा रोक लगाएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा सरकारी वा निजी कार्यालयले भवन निर्माण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनिवार्य रुपमा नक्सा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कामपा–११ का वडाध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारका अनुसार संस्थान हातामा निमाृण भइरहेको भवन संस्थान आफ्नै नभई व्यापारिक प्रयोजनका लागि अरूले नै निर्माण गरिरहेको भवन हो । अहिले रोक्का गरिएको उक्त भवनले करीब सात रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ ।
उक्त विषयलाई लिएर वडा र संस्थानका अधिकारीबीच पटक पटक छलफल भएपनि निष्कर्ष निस्केको छैन । भ्रष्टाचार गर्न रकम प्राप्त हुनेसंस्थानका अधिकारीले कर तिर्ने रकम भने आफूहरुसँग नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रपतिले बोलाइन् शीर्ष नेतालाई शीतल निवास, पशुपति शर्माको गीतको चर्चा !
के नेपालमा फेसबुक र ट्वीटर प्रतिबन्ध लाग्दैछ, यस्तो छ सरकारले ल्याएको नयाँ कानून
विप्लवद्धारा फागुन ८ गते साविक लुम्विनी अञ्चल बन्द आव्हान
ओली सरकारले बाड्यो आर्थिक सहायतामा नाममा ८० लाख, कस कसले पाए त्यस्तो खर्च
गिजाबाट रगत बग्छ भने यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ
बागलुङमा जीप दुर्घटना, ३ जनाको ज्यान गयो
बङ्लादेशका २० हजार साइट बन्द
भारतले आक्रमण गरे पाकिस्तानले प्रतिकार गर्ने
आर्थिक रुपान्तरणका लागि ढोका खुल्यो: राष्ट्रपति
कश्मिर आक्रमणपछि: यिनीहरुलाई गोली ठोक भन्दै सडकमा अतिवादीहरु